htaccess [Redirect]: Iwu, ụkpụrụ, na-achịkwa ọdịnaya gị bipụtara na net | Site na Linux
Fewbọchị ole na ole gara aga, agwara m gị htaccess, na Emere m okwu mmeghe na ihe niile 🙂
Dika m kwuru na ngwụcha post ahụ ... ugbu a ọ bụ oge ikwu maka ya redirect na htaccess. Nke ahụ bụ, mgbe ha banyere / tinye URL ma ọ bụ folda site na iji ihe nchọgharị, URL ọzọ gbanwere na-akpaghị aka / bugharịa / meghee.
Echere m ... ịkọwa ọbụna dị mfe 😀
Anyị na-abanye dịka ọmụmaatụ: http://sitio.com/carpetas/ ma anyi huru na enwere folda 2, / nchekwa1 / y / nchekwa2 /
Ọ bụrụ na anyị banye / nchekwa1 / anyị na-ahụ ọdịnaya nkịtị, mana ọ bụrụ na anyị abanye / nchekwa2 / mgbe ahụ ihe nchọgharị anyị na-akpaghị aka ga-aga na saịtị ọzọ, nke anyị chọrọ ... n'agbanyeghị ma anyị chọrọ ma ọ bụ.
Nke a bụ ihe m na-ekwu maka ya.
Otu ihe atụ bụ nke anyị mere ebe a na FromLinux 😀
Ọ bụrụ na i tinye: http://www.desdelinux.net Will ga - ahụ etu esi ebutegharị ha na akpaghị aka na blọgụ (https://blog.desdelinux.net)
Maka m iji mezuo nke a, achọrọ m itinye ya .htaccess nke na-esote:
Ahịrị ndị a kọwara n'ụzọ dị mfe:
Malite iji usoro nyocha nke Apache.
Ọ bụrụ na enwetaghachila igwe ...
M debere iwu: mepee https://blog.desdelinux.net
M na-emechi ojiji nke modul.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka enweta njikọ ọzọ, naanị ị ga-agbanwe ụzọ (na ihe atụ ọ bụ adreesị blog) na voila 😀
Ihe ọzọ m ga-etinye htaccess Echere m na ọ ga-ebigharịkwa, mana yana ọnọdụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị na-esi na ya abanye http://link1.sitio.com mgbe m na-emegharị gị gaa na http://sitio.com ... ma ọ bụrụ na ị na-enweta site na http://link2.sitio.com aga m agbaghari gị http://pepito.net
Ma ụfọdụ ndị ọzọ Atụmatụ 😀
Agbanyeghị, ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ajụjụ htaccess ma ọ bụ na ịchọrọ ihe, ị gwara m na m ga-enyere gị aka ruo ókè m nwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » htaccess [Redirect]: Iwu, ụkpụrụ, na-achịkwa ọdịnaya gị bipụtara na netwọkụ
Ozi metụtara isiokwu dị ka ndị a bụ ihe kachasị mma, ozi bara ezigbo uru 😀
Ezi ozi KZKG ^ Gaara.
Ezigbo mma ……
Onye ozo ekele partner
Okomoko na mmasị, ọkachasị maka webmasters.
Daalụ maka nkọwa 😀
LibreOffice 3.5.5 wepụtara